दिगम्बरले ओलीलाई सजिलो पारिदिए, लक्कीले प्रचण्डलाई सजिलो पारिदेलिन्? - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका नेकपा नेताहरुले विरोध गरेपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बुधबार राजिनामा दिए। राजिनामासँगै झाले बताएका छन्, ‘सञ्चारमन्त्री गोकूल बाँस्कोटालाई सहज बनाइदिन मैले अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएको हुँ।’
निश्चय नै, झाको राजिनामाले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई सहज बनाइदिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि भएका नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा झाको नियुक्ति पनि खारेज भएको थियो। तर, झाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याइदिए।
झाको नियुक्ति त्यतिबेला भएको थियो, जतिबेला पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति वर्तमान सरकारले खारेज गर्ने, तर खारेजीमा परेकाहरुले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने र अदालतले पनि उनीहरुलाई जिताइदिने गरिरहेको थियो।
पूर्ववर्ती नजिरहरु हेर्दा झाको हकमा पनि यही हुनेवाला थियो। यसले सञ्चार मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई अप्ठेरोमा पाथ्र्याे। प्रम केपी शर्मा ओलीले अत्याधिक विश्वास गरेका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा चाहिँ नेपाल टेलिकम लगायत दुरसञ्चार क्षेत्रमा केही काम गरेर देखाउने योजनामा थिए।
झाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको स्थिति, सरकारले गरेका निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याएका नजिर आदिलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले झालाई नै पुनर्नियुक्ति गर्‍यो। बदलामा झाले पनि मुद्दा फिर्ता लिए। यति भएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले पनि आफ्नो सुधारका योजना अघि बढाउने समय पाए।
तर, यो विषय सत्तारुढ दलभित्र विवादको विषय बन्यो। केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापन पत्र नै लेखे। र, उनलाई बर्खास्त गर्न माग गरे। एक पटक होइन, दुई पटक केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर अभियान नै चलाए।
नेकपाको जारी स्थायी समितिको बैठकमा पनि यो कुरा उठ्यो। स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले झाको नियुक्तिबारेमा बैठकमा जोडदार रुपमा कुरा उठाए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पनि अप्ठेरोमा परे।
प्रम ओली र सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई सजिलो बनाउन भन्दै झाले बुधबार राजिनामा दिएका छन्। राजिनामा अघि पत्रकार सम्मेलन गरेर झाले आफूलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आरोप पुष्टि गर्न चुनौति दिए। तर उनकै राजिनामाले यो चुनौतीको खण्डन गर्दै उनको पुर्ननियुक्ति नै गलत थियो भन्ने सावित गरिसकेको छ।
जे होस्, उनको राजिनामाले सरकारलाई राहत पुगेको छ। आफ्नो विरोध भएपछि राजिनामा दिएर उनले ‘नैतिकताको प्रदर्शन’ गरेको दाबी गर्न पनि पाएका छन्।
त्यस्तै गम्भीर आरोप अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि पनि लागेको छ। उनीमाथि रकम लिएर चालकलाई अष्ट्रेलिया लगेको आरोप लागेको छ। र, यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन–तीन जना सहसचिव रहेको कार्यदल नै बनाएको छ।
सो कार्यदलसामु राजदूत शेर्पाले काठमाडौँ आएर बयान समेत दिनु परेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको कार्यदलले मन्त्री समक्ष प्रतिवेदनपनि बुझाइसकेको छ।
तर, मन्त्रालयले उनको सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले उनीमाथि लागेको आरोप गलत हो भनेर न सफाइ दिन सकेको छ, न त उनी दोषी हुन् भनेर कार्वाही गर्न नै। विषयको सम्वेदनशीलता यसैबाट बुझ्न सकिन्छ।
बुझ्न गार्‍हो छैन, शेर्पा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को प्रस्तावमा राजदूत भएकी हुन्। प्रचण्ड परिवारसँग उनको पारिवारिक जस्तै सम्बन्ध छ। यही ‘प्रचण्ड फ्याक्टर’ का कारण परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत शेर्पाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नसकेको देखिन्छ।
लक्की प्रकरणले प्रचण्डपनि निकै अप्ठेरोमा परेका छन्। बताइन्छ कि, जब उनीमाथि आरोप लाग्यो, खुमलटारको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेकी उनलाई प्रचण्डले राजिनामा दिन सुझाव दिएका थिए। ‘पारिवारिक फ्याक्टर’ का कारण उनले सुझावमात्र दिन सके, दबाब दिन सकेनन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ प्रचण्डलाई के सुझाव दिँदै आएको बताइन्छ भने, ‘लक्कीलाई राजिनामा गराउन लगाउनोस् र उनको साटो अर्काे कुनै व्यक्तिलाई राजदूत प्रस्ताव गरिदिनुस्, तत्काल ती व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस-नियुक्ति गर्छाैँ।’
प्रचण्ड अप्ठेरोमा छन्, उनले लक्कीलाई सुझावमात्र दिन सक्छन्, राजिनामाको दबाब नै दिन सक्दैनन्। दिगम्बरले ओली र बाँस्कोटाको मर्का बुझेर राजिनामा दिएझैँ लक्कीले चाहिँ प्रचण्डको मर्का बुझेर सजिलो पारिदिने ‘उदारता’ प्रकट गर्न सकेकी छैनन्।
आजसम्म जुन प्रहार झाले भोगिरहेका थिए, राजिनामा मार्फत् उनले त्यो निशानालाई निश्प्रभावी बनाइदिएका छन्। प्रहारले जहिले पनि निशाना खोजिरहेको हुन्छ, सम्भवत: अबको निशाना लक्की बन्नेछिन्।
समयमै राजिनामा दिएर बुद्धिमत्ता प्रकट गरिन् भने नेकपा, परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई सहज हुनेछ। अप्ठेरो शेर्पालाई पनि पर्नेछैन।
तर, के दिगम्बरले जत्तिको सुझबुझ र बुद्धिमत्ता लक्कीले प्रदर्शन गर्न सक्लिन्?
प्रकाशित ११ पुस २०७५, बुधबार | 2018-12-26 20:55:38